Dargaggoonni Oromoo %77 carraa barnoota sadarkaa 2ffaa hin argatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Dargaggoonni Oromoo %77 carraa barnoota sadarkaa 2ffaa hin argatan
Dargaggoon Oromoo %23 qofa barnoota sadarkaa 2ffaa kan hordofaa jiru. Naannoo Tigraayitti %45.
Laakkofsi dargaggoota Oromoo barnoota sadarkaa lammaffaa (kutaa 9 – 12) baratan kan naannolee biraan yoo wolbira qabamu baay’ee xiqqaadha. Akka ragaan ministera barnoota argisiisutti dargaggoo Oromoo barnoota sadarkaa 2ffaa (kutaa 9 – 12) barachuu qaban 3, 274, 943 keessaa 763, 642 (% 23) qofatu barnoota hordofaa jira. Kuni isa naannolee biraan yoo wol bira qabamu hedduu xiqqaadha.
Dargaggoon naannoolee biraa, Somaalee fi Affaariin alatti, isa Oromiyaa irra bifa fooyya’aa ta’een barnoota sadarkaa 2ffaa hordofaa jiran. Akka fakkeenyaatti naannoo Tigraayitti dargaggoo umriin isaanii 15 – 18 jiddutti argamu keessaa %45 (213,021) barumsa sadarkaa 2ffaa argataa jiru. Ijoolleen barnoota sadarkaa 2ffaa argataa jiran naannoo Amaaraatti %33, Beniishangul Gumuz %31 fi Naannoo Kibbaatti %31 dha.
Naannoo Oromiyaatti ijoollee barnoota sadarkaa 2ffaaf argachuu qaban keessaa %77 barnoota osoo hin argatin hafa jiru. Kana jechuun ijoolleen kuni yeroo kanatti kan argaman daandii irra ykn hujii qonnaa irra ta’uu mala. Kuni har’as ta’ee fundura Oromootiif rakkoo guddaadha. Oromoon Gaafa Afrikattis ta’ee addunyaa irratti dorgomaa kan ta’uu kan danda’u yoo nama barate sadarkaa barbaachisutti omishuun danda’e qofa. Ijoollee barnoota sadarkaa 2ffaa hin arganne daandiin, qonnaa fi daldallis kophatti baadhachuu akka hin dandeenne hubatamuu qaba. Rakkoon kamuu jiraatu cimanii barachuudhaan alatti dargaggoon Oromoo fala biraa kan hin qabne ta’uun isaa beekuu qaba. Mootummaan Lammaa Magarsaas dhimma kanaaf xiyyeeffannaalaatee hojjachuu qaba.
Previous articleMootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa’eef godhamu qindeessitu dhaabe
Next articleOromoon moo’aara: Irreen ummataa huumna kamuu ni injifata